Factory Factory Series - Mpanamboatra Series China China
Multifunction ZNC Sinker EDM Machine 580mm Max Distance Ho an'ny fanodinana bobongolo
Model: CNC540 Tety fitsangatsanganana: 500 * 400 * 200mm Karazana maodely: Masinin-kesika CNC EDM fitoeran-diloilo: 1300 * 720 * 450mm latabatra: 800 * 400mm Max. Load Of Eletrode Head: 150kgs Precision Spark Erosion ZNC CNC EDM Die Sinking Machine ho an'ny fanodinana bobongolo CNC 540 1.Fomba fametahana milina isan-karazany izay mety mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa samihafa. Fiasa tsara 2.Bottom - Rehefa tonga amin'ny halalin'ny irina ny milina dia hiasa hatrany amin'ny fizotry ny milina tsara. 3. Fikajiana mandeha ho azy, harato ary adjustme ...
700 * 400mm latabatra haben'ny milina EDM EDM, Milamina CNC Sinker EDM Machine CNC450
Loha elektroda: 280mm maodely: Travel latabatra CNC450: 450 * 350 * 200mm Loko: karazana modely azo alaina: CNC EDM haben'ny fitoeran-diloilo: 1100 * 710 * 450 Milina famoahana herinaratra ZNC540 miorina sy azo antoka ho an'ny fanodinana bobongolo 1.Fiorenana sy kalitao azo antoka ho an'ny fanodinana bobongolo. Lozam-pifamoivoizana 1.High: mety indrindra amin'ny ampahany amin'ny milina toy ny maty, fandavahana na mankaleo 3. Contrôle marika marika Taiwan malaza, azo itokisana ary marina. 4.mba isan-karazany ny fampiharana: fandavahana, mankaleo, medium-entana mil ...
Masinina avo lenta CNC EDM Machine, Masinina sivana 650L Cude EDM Spark Machine
Model: CNC1680N Fitsangatsanganana an-databatra: 1600 * 800 * 500mm haben'ny fitoeran-diloilo: 2550 * 1500 * 560mm haben'ny latabatra: 1700 * 1000mm Max. Load Of Eletrode Head: 400kgs Net Weight: 9000kg 1000 * 600 * 450mm latabatra fitsangantsanganana CNC EDM masinina ho an'ny fanodinana bobongolo CNC 1060N 1.Fametrahana trano fonenana servo anatiny mialoha, amin'ny alàlan'ny famolavolana PCB ho an'ny androm-piainana maharitra, fandidiana azo antoka ary fikojakojana mora foana. 2. Ampiasao ny electrocircuit MOSFET, miaraka amina fanodinana hafainganam-pandeha haingam-pandeha, ary fatiantoka ambany amin'ny electrode 3. PC-mahatohitra PC ...